विनीता मरहट्टा शुक्रवार, कात्तिक १७, २०७४ 5105 पटक पढिएको
काठमाडौं : अभिनेत्री बेनिशा हमाल केही समय अघिसम्म कसैसँग मिटिङ गर्नुपर्‍यो भने ‘कहाँ बोलाऊँ' भनेर सोचमग्न हुन्थिन् । विकल्प धेरै भएर होइन, विकल्प नभएर । कि त सिटी सेन्टरको ‘जाभा' कि लाजिम्पाटस्थित ‘एलई' । उनलाई पायक पर्ने हिसाबले यी दुईबाहेक विकल्प रहँदैनथ्यो ।
आफ्नो पायक पर्ने, भेटघाट गर्न सजिलो हुने ठाउँ भेट्नै मुस्किल हुन्थ्यो । यही भोगाइले उनलाई कफी सप खोल्न घच्घच्यायो । थाहा पाइन्, उनी सधैं जिम गर्न जाने सिनमंगलस्थित फिटनेस सेन्टर छेउमा रहेको क्यान्टिन बिक्रीमा रहेछ । आफ्नो बजेट अनुसारको भएकाले खरिद गरिहालिन् । एक महिनाजति भयो, ‘लाला' क्याफे सञ्चालनमा आएको । यसको औपचारिक उद्घाटन भने भएको छैन ।
अझै थुप्रै काम बाँकी छन्, पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।क्याफेमा कन्टिनेन्टल र इटालियन खानाका परिकार राख्ने योजना छ उनको । नियमित पाइने परिकारमा केही फरकपन मिसाएर सर्भ गर्नेबारे पनि योजना बनिरहेको छ । पुरानै शैलीको क्याफे खोलेर केही अर्थ हुँदैन । कस्टमरलाई केही भिन्न सर्भ गर्न सक्नुपर्छ । अहिले उनी कस्टमर र स्टाफको सन्तुष्टिमा बढी ध्यान दिइरहेकी छन् । सुटिङ नभएका बेला उनलाई क्याफेले नै व्यस्त बनाएको छ । साथीहरू आउँदा आफैं कफी बनाउँछिन्, सर्भ पनि गर्छिन् । कलेज नजिक भएर होला, क्याफेमा युवा नै बढी आउने गरेको उनी बताउँछिन् ।
अभिनय आफ्नो ठाउँमा छ । पहिलेदेखि उनको चाहना रेस्टुरेन्ट व्यवसायी बन्ने थियो । भनिन्, ‘यति छिटो होला भन्नेचाहिँ सोचेकी थिइनँ ।' नेसनल जियोग्राफी, टीएलसी लगायतका टेलिभिजन च्यानलमा पनि रेस्टुरेन्ट रिभ्यु हेर्ने गर्थिन् । अहिले सानो लगानीमा व्यवसायीका रूपमा यात्रा सुरु गरेकी छन् । अहिले क्याफे केवल टेस्टका लागि रोजिँदैन । राम्रो वातावरण खोज्नेहरूको रोजाइमा क्याफे पर्ने गरेको छ । बेनिशा भन्छिन्, ‘टेस्टसँगै गुड फिल हुनुपर्छ ।' कफीका पारखीले स्वाद त चिनिहाल्छन्, त्योसँगै राम्रो वातावरण क्याफेको विशेषता भएको उनी बताउँछिन् ।
अभिनेत्री श्वेता खड्काले हिमालयन जाभाको फ्रेन्चाइज नै लिएर कफी सप सञ्चालन गरेकी छन् । कमलादीस्थित राइजिङ मलको हिमालयन जाभामा उनको व्यावसायिक जीवन देख्न सकिन्छ । चलचित्र होस् या व्यवसायसम्बन्धी भेटघाट प्रायः उनी यहीँ आयोजना गर्ने गर्छिन् । उनलाई भेट्न जानेहरूलाई पनि दसतिरको लोकेसन सोचिरहने झन्झट रहेन ।
अभिनेत्री कृति भट्टराई बिजुलीबजारस्थित ‘एसप्रेसो कफी सप'मा व्यस्त भेटिन्छिन् । उनको व्यावसायिक यात्राले राम्रो बाटो समाइरहेको छ । क्याफे पब्लिक फिगरलाई पब्लिकबाट टाढा हुन नदिने व्यवसाय हो । सधैंका मिटिङलाई निरन्तरता दिँदै व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । प्रायः कफीका सोखिनहरूको गन्तव्य हुने भएकाले क्याफेमा विचार मन्थन गर्नेहरूको आवतजावत हुन्छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ, अभिनेत्रीहरूले आफ्नो स्ट्यान्डर्डलाई ध्यानमा राखेर नै यो व्यवसाय रोजेका ।
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ युट्युबबाट सेलिब्रेटी बनेकाहरू
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ 'लेडिज ब्यान्ड'को 'असामयिक अन्त्य'
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ मिस एन्ड मिस्टर थारूका सपना
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ ट्वीटरमा २८० क्यारेक्टरको हिसाबकिताब
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ शिरैमा शिरफूल
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ रेस्लिङ : इन्जुरी एन्ड इमोसन
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ ग्याङ अफ फाइभ
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ स्कुटरवाली
बम राखेको हल्ला चलेपछि सर्वोच्च अदालतमा तनाव 1545
स्थानीय तहमा चौथाइ कर्मचारी 2095
मतदातालाई ओलीको पत्र : ‘अबको ५ वर्ष वामपन्थीलाई परीक्षण गर्नुहोस्' 4895
गृहमन्त्री खोइ ? 3198
'सुरक्षा चुस्त बनाऊ' 415
अनेक प्रश्नमा कांग्रेस 85
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 75
कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद 206
‘भिजन सिन्ड्रोम'को बढ्दो समस्या 317
कडा सुरक्षासाथ खटिँदै निर्वाचन कर्मचारी 1129
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1287
सप्तरीमा महिलाको हत्या 674
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8824
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14455
एक महिनासम्‍म एनालगबाटै टिभी प्रसारण गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय 4755
एनालग टीभी बन्द : ३० लाख ग्राहक प्रभावित 32490